Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis (Qeybtii labaad): W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud | RBC Radio
Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis (Qeybtii labaad): W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud
Posted on May 18, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis (Qeybtii labaad):
Guuleed iyo walaalkis waxay noqdeen Rag ubabaac) dhiga Hawsha adag ee saldhiga u ah nolosha Miyiga.
Maalin malmaha kamida Guuleed wuxuu soo -aaday isagoo Macawis yar iyo Kabo Jabbala xiran laakiin aan shaar ama Shati iyo Funaan midna haysan. magaaladda, hantiilaha ugu weyn ee Magaaladu waa guuleed Adeerkis.
Guuleed oo muuqaal ahan ka duwan dhalinta da’diisa ayaa soo galay Dukaan weyn oo Adeerkiis leeyahay wuxuuna ku (il -xaaxay) Badeecada iyo dhaqdhaqaqa Dukanka iyo waxyaalo cusub oo uusan weligiis arag.
Guuleed wuxuu cindiga iyo laabta gashaday haddiiba Adeerkaa sidan Hanti magaallo’ uleyahay waxaa habbooneyd inaad mar horeba soo aado.
Wiil Da’da guuleed ah laakiin ka labis qurxoon ayaa intuu Guuleed usoo dhawaaday su’aalay war maxaan kaa iibina, isagoo usii raacshay lama istaago Meherada ilinkeedda.
Kolkaas ayuu Guuleed wuxuu si hoosa ugu jawaabay wiilkii walaal waxaan ahay guuleed waxana adeerkay ah Boorsaweyne), oo ah Adeerka guuleed.
Wiilkii intuu si deg deg ugu labtay dhanka gudaha Dukanka- ayuu Abbihiis oo ah guuleed adeerkiis wuxuu ku yiri (Abbo) waxaa bannanka tagan wiil adiga ku raba.
Adeer Boorsaweyne Hal-halleel ayuu usoo baxay wuxuuna is yiri malaha waa mid Badeeco) iiba wada amba waa mid Allaab iibsan doona, Boorsaweyne” waxaa indhihiisa qabtay Cunug yar oo Cagaha boor kuleh TIMO WEYN) oo dhafuurkiisu dhiddid ka shuxayo, indho fiiqfiiqan o aad moodo inuu yahay Askari heegan ku jira (Ul) yar oo bulay lehna wata.
Guuleed oo yaraha faraxsan madaaba Adeerkiis u maanta la kulmayo “ayaa” yiri Adeer waxan ahay Guuleed waxan usocday Adiga, Adeer/ Boorsaweyne ayaa ku jawaabay war fiiri maxad halkan kasoo doontay` lama soo -aado meel adan aqoon, ku labo gurigiina ayuu ku yiri isagoo wajiga iyo indhaha Biriir ka kicinaya)! Guuleed wuxuu si lama filaana uga naxay hadalka´ adeerkiis waxaa fajac iyo ama kaag ku noqotay wax uu Adeeriis kale kulamay.
Maxaa dhacay kulan kale oo Guuleed uu la kulamay Adeerkiis kale..
lasoco qeybta seddexad ee Guushii Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis),
Madadaallo Malwo awaal